अनन्तताको थ्रेसहोल्ड: "कसरी: हामी सबैको कथा" | वर्तमान साहित्य
अनन्त कालको थ्रेसोल्ड
जुआन अर्टिज | 15/11/2021 15:15 | जीवनी, किताबहरु, नोभेला
केन Follett द्वारा उद्धरण।
अनन्त कालको थ्रेसोल्ड पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखक केन फोलेट द्वारा एक समकालीन ऐतिहासिक कथा उपन्यास हो। यो सेप्टेम्बर 2014 मा प्रकाशित भएको थियो र को तेस्रो किस्त हो शताब्दीको त्रयी, जुन द्वारा पूरक छ राक्षसको पतन (2010) र संसारको जाडो (२०१२)। यस अवसरमा, नायकहरू गाथामा अघिल्लो शीर्षकका मुख्य पात्रहरूका सन्तान हुन्।
यस त्रयीमा, लेखकले विभिन्न राष्ट्रियताका पाँच परिवारको इतिहास र उनीहरू कसरी प्रभावित भएका छन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेका छन् पुस्ताहरू मार्फत- द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक घटनाहरू। यस सन्दर्भमा, फोलेट भन्छन्: "यो मेरो हजुरबा हजुरआमा र तपाईंको, हाम्रा आमाबाबु र हाम्रो आफ्नै जीवनको कथा हो। एक हिसाबले यो हामी सबैको कथा हो।"
1 अनन्तताको थ्रेसहोल्डको सारांश
1.1 कथा सुरु हुन्छ
1.2 पूर्वी जर्मनी
1.3 संयुक्त राज्यमा
1.4 युनाइटेड किंग्डम
1.5 सोभियत संघ
1.6 साँचो नियति
3 लेखक केन फोललेटको बारेमा
3.1 व्यावसायिक करियर
3.2 साहित्यिक क्यारियर
3.3 Ken Follert ले काम गर्नुहुन्छ
सारांश अनन्त कालको थ्रेसोल्ड
कथा सुरु हुन्छ
उपन्यास दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको १६ वर्षपछि सन् १९६१ मा सुरु हुन्छ। हामी एक समयको बारेमा कुरा गर्दैछौं जब ठूला शक्तिहरूले फाइदा उठाएका छन् - तिनीहरूमध्ये, रूस, सोभियत संघको सबैभन्दा ठूलो देश। रुसीहरूले आफ्नो कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई जर्मनी नपुग्दासम्म सम्पूर्ण इलाकामा लागू गरे, जसले गर्दा जर्मनहरूले आफ्नो देश छोड्न थाले।
यो भाग तारा छ रेबेका, फ्रान्क परिवारको एक पूर्वी जर्मन शिक्षक - लेडी माउडकी नातिनी - जो एक दिन Stasi बाट सबपोना प्राप्त भयो - जर्मन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (GDR) को गोप्य पुलिस -। यसले उनलाई तुरुन्तै चासो दियो, किनकि उनलाई आदेशको कारण थाहा थिएन। तर, उनी तोकिएको मितिमा उपस्थित भए । एक पटक ठाउँ, उनी एक विस्तृत प्रश्नको अधीनमा थिए।
भयावह व्याख्या पछि, रेबेका उनी तुरुन्तै स्टासी मुख्यालय छोड्न चाहन्थे, तर उनको पति हान्समा भागिन्। त्यही बेला महिलाले थाहा पाएकी थिइन् मानिसले उसलाई धोका दिए विवाह भरि। उहाँले उहाँ Stasi लेफ्टिनेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उसले आफ्नो परिवारको जासुसी गर्न मात्र उनीसँग विवाह गर्यो।
सबै कुरा सुनेर, रेबेकाले शहरबाट भाग्न खोजे, तर उसले सकेन, उहाँको प्रस्थान GDR सरकारबाट एक भयानक जनादेश संग मेल खायो। तिनीहरूले देशबाट पेशेवरहरूको निरन्तर उडान रोक्नको लागि "दुई जर्मनी" विभाजन गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यो क्षण देखि कुख्यात बर्लिन पर्खाल निर्माण सुरु भयो, र रेबेका आंशिक रूपमा फँसिएको थियो र प्रत्येक छेउमा सयौं हजार जर्मनहरूसँगै अलग्गै राखिएको थियो।
ती क्षणहरूमा, उहाँ संसारको अर्को छेउमा हुनुहुन्थ्यो जर्ज जेक्स —ग्रेग पेस्कोभको छोरा—, एक जवान मानिस जसले राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको प्रशासनमा वकिलको रूपमा सेवा गरे। यसबाहेक, यो थियो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता को अफ्रिकन अमेरिकन अमेरिकामा उनको संघर्षले उनलाई देशको दक्षिणी भागमा भएको विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन र मार्टिन लुथर किंगको नेतृत्वमा वाशिंगटनसम्मको मार्चमा भाग लिन अगुवाइ गर्यो।
जर्ज समान अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा काम गरिरहेको थियो. यद्यपि, केनेडीको हत्या भएपछि त्यो अर्थहीन भयो। वर्षौं पछि, उनले बबी केनेडीसँग काम गर्न थाले, यद्यपि उनको योजना फेरि बिग्रियो जब यो व्यक्तिको पनि हत्या भयो।
डेव विलियम्स उहाँ यस युरोपेली क्षेत्रमा इतिहासको नायक हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट, उनले अन्य दुई महाद्वीपको द्वन्द्वको चिन्ताको साथ चिन्तन गर्न सक्षम भए। युवक उनले संगीतकार बन्ने र आफ्ना साथीहरूसँग रक ब्यान्ड बनाउने सपना देखे। एक पटक उनी सफल भए, उनले स्वतन्त्रताको अभाव र अन्यायमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न गीतहरू प्रयोग गरे।
सफलता को लागी धन्यवाद समूहीकरण को, तिनीहरू अमेरिकी महाद्वीपमा यात्रा गरे। त्यहाँ डेभ र उनका ब्यान्डमेटहरू हुनु सान फ्रान्सिस्कोमा बसोबास गरे र हिप्पी आन्दोलनको उत्पत्तिमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुभयो - भियतनाम युद्धको अन्त्यको लागि प्रदर्शन गरिरहेका युवा अमेरिकीहरूको नेतृत्वमा वर्तमान।
फोलेटले हामीलाई प्रस्तुत गरेको सोभियत संघको राजनीतिक वातावरण कुनै पनि सरल छैन। लेखकले ख्रुश्चेभको मृत्यु र ब्रेज्नेभले सत्ता कब्जा गरेपछि पाठकलाई स्थान दिन्छन्। शीतयुद्धले त्यसबेला अविनाशी मानिने संरचनाको जगलाई रिस उठ्यो र कमजोर बनायो। आफ्नो भागको लागि, रूसमा, गोर्बाचेभले पेरेस्ट्रोइका योजनाको साथ देशको अर्थव्यवस्था बचाउने प्रयास गरे, तर उनको प्रयास व्यर्थ भयो।
यो दृश्य अन्तर्गत, यस खण्डका नायकहरू देखा पर्छन्: जुम्ल्याहा दिम्का र तानिया. को, एक युवा पार्टी सदस्य कम्युनिस्टआन्दोलनको उदाउँदो तारा; sतिमी बहिनी, एक विद्रोहको लागि लडाकु। माथि उल्लिखित परिणामको रूपमा, विरोधहरू बढ्यो - सरकारहरूद्वारा गरिएका खराब उपायहरूसँग - जसले साम्यवादको पतनलाई गति दियो।
घटनाको यो श्रृंखला पछि, अन्ततः, नोभेम्बर 11, 1989 मा, बर्लिन पर्खाल भत्कियो।
कथा सन् १९६१ र १९८९ बीचको हो - शीतयुद्धको पूर्ण विकासमा। प्रत्येक पात्र एक स्वतन्त्र लडाई मार्फत जान्छ। संसारले जटिल क्षणहरू अनुभव गर्दछ जसमा ठूला शक्तिहरू आफ्नै स्वार्थका लागि लड्छन् तिनीहरूको कार्यको नतिजालाई विचार नगरी।
अनन्त कालको थ्रेसोल्ड द्वारा उपन्यास छ ऐतिहासिक कथा विधा। यो सर्वत्र विकास हुन्छ 10 भागहरू जुन बारीमा अध्यायहरूमा विभाजित छन् र त्यो केहि थप्नुहोस् १००० पृष्ठहरू। काम छ एक रेखीय तरिकामा वर्णन एक सर्वज्ञ कथाकार द्वारा जसले सरल र मनोरञ्जनात्मक भाषा प्रयोग गर्दछ - फोलेटले आफ्नो लामो क्यारियरमा खेती गरेका गुणहरू र जसले लेखकलाई पहिले नपढेको भए पनि पाठकलाई लगभग तुरुन्तै समात्छन्।
लेखक केन फोललेटको बारेमा
केनेथ मार्टिन फोलेट—केन फोलेट—को जन्म ५ जुन १९४९ मा वेल्सको राजधानी कार्डिफमा भएको थियो। उनका आमाबाबु भिनी र मार्टिन फोलेट थिए। उनी5वर्षको उमेरसम्म आफ्नो गृहनगरमा बस्थे, र त्यसपछि उनी लन्डन गए। अन 1967, युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनमा दर्शन अध्ययन गर्न थाले, त्यो दौड यो तीन वर्ष पछि समाप्त भयो।
1970 मा, उनले पत्रकारिता पाठ्यक्रम लिए तीन महिनाको लागि, जसले नेतृत्व गर्यो तीन वर्ष रिपोर्टरको रूपमा काम गर्नुहोस् साउथ वेल्स इको, कार्डिफमा. पछि, उनी लन्डन फर्किए, जहाँ उनले काम गरे साँझ मानक। ७० को दशकको अन्त्यमा उनले पत्रकारितालाई पन्छाएर प्रकाशनतर्फ झुकाए र एभरेष्ट बुक्सको व्यवस्थापनका उपनिर्देशक बने।
उनले शौकको रूपमा कथा लेख्न थाले, तर, को प्रकाशन संग उनको जीवन परिवर्तन भयो सुईको आँखा (1978), उनको पहिलो उपन्यास। यस पुस्तकको लागि धन्यवाद, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अतिरिक्त एडगर पुरस्कार प्राप्त गरे। उनको अर्को हिट फिल्म सन् १९८९ मा आएको थियो पृथ्वीको खम्बाहरू, काम जसको साथ यसले 10 वर्ष भन्दा बढीको लागि युरोपमा पहिलो बिक्री स्थान ओगटेको छ।
आफ्नो करियरमा उनले ऐतिहासिक र सस्पेन्स विधामा २२ उपन्यास प्रकाशित गरेका छन्। तिनीहरू तिनीहरूको बीचमा खडा छन्: अजि .्गरको मुखमा (1998), अन्तिम उडान (2002), एक अन्तहीन संसार (2007) र शताब्दी त्रयी (2010)। उनका पुस्तकहरू मध्ये,7लाई टेलिभिजन र सिनेमाका लागि रूपान्तरण गरिएको छ, साथै महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू प्रदान गरिएको छ, जस्तै: बनकारेला पुरस्कार (1999) र अन्तर्राष्ट्रिय थ्रिलर लेखक पुरस्कारहरू (2010)।
Ken Follert ले काम गर्नुहुन्छ
आँधीको द्वीप वा सुईको आँखा (1978)
सेन्ट पीटर्सबर्गका मानिस (1982)
चीलको पखेटा (1983)
सिंहहरूको उपत्यका (1986)
पृथ्वीको खम्बाहरू (1989)
पानी माथि रात (1991)
खतरनाक भाग्य (1993)
स्वतन्त्रता भनिने ठाउँ (1995)
तेस्रो जुम्ल्याहा (1997)
अजि .्गरको मुखमा (1998)
डबल खेल (2000)
उच्च जोखिम (2001)
अन्तिम उडान (2002)
एक अन्तहीन संसार (2007)
राक्षसको पतन (2010)
संसारको जाडो (2012)
अनन्त कालको थ्रेसोल्ड (2014)
आगोको स्तम्भ (2017)
अन्धकार र बिहान (2020)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » अनन्त कालको थ्रेसोल्ड
Jacinta Cremades। रिटर्न टु पेरिसका लेखकसँगको अन्तर्वार्ता
के तपाईको eReader मा 4G हुनु आवश्यक छ?